Shariif Xasan: Muddo Kororsigu Waa Sharci
Shariif Xasan ayaa sheegay inaan loo baahneyn in dib loogu laabto dastuurkii 60-kii ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarmaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddo kordhinta baarlamaanka ay tahay mid sharci ah.
Shariif Xasan wuxuu sheegay inaan loo baahneyn in dib loogu laabto dastuurkii 60-kii ee Soomaaliya. Hadalkan ayuu ugu jawaabayay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Shariif Xasan wuxuu sheegay in madaxweyne Shariif uu soo qoray warqad ku aaddan muddo kordhinta baarlamaanka, isagana uu dib ugu qoray warqad kale oo uu ugu sheegayo in tallaabada baarlamaanka uu muddada ku kordhistay ay tahay mid loo maray sharciga.
Shariif Xasan wuxuu sheegay in qodobka 70aad ee Axdi-Qarameedka KMG ah uu awood u siinayo baarlamaanka inuu wax ka bedel ku sameyn karo qodobada dastuurka.
Wuxuu sheegay in 21-ka August ay u bilaabmeyso baarlamaanka saddex sano oo muddo kordhin ah.
Dhanka kale, Madaxweynaha dowladda KMG ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka jawaabay hadalka guddoomiyaha baarlamaanka. Shir jaraa’id oo uu maanta qabtay ayuu madaxweynuhu ka sheegay inuu jawaabta ka sugayo baarlamaanka.
Hadalladan ka soo kala yeeray madaxweynaha iyo goddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya, iyadoo dowladda KMG ah ay ku jirto dagaalo culus oo ka dhan ah kooxda mucaaradka ee al-Shabaab, isla markaana dowladdu ay guulo ka gaartay dagaaladaasi.